Tsy nipoitra ny fiaramanidina izay tsy mampiseho ny hoditra ivelany fa matin Marauder ihany no aseho
fanontaniana Tsy nipoitra ny fiaramanidina izay tsy mampiseho ny hoditra ivelany fa matin Marauder ihany no aseho
1 taona 5 ora lasa izay #965 by robtho
Rehefa mividy fiaramanidina vitsivitsy aho dia ny Martin Marauder C47 Boeing Superfotress dia mahazo ny asa anaty ao amin'ilay fiaramanidina ihany aho
1 taona 4 minitra lasa izay - 1 taona 2 minitra lasa izay #966 by DRCW
Mijery ny tsindry DX9 na DX10 ianao? Manao FSX ve ianao na Box? Raha misy hazakaza-tsavily mihazakazaka miaraka aminao sa tsia? What version of windows do you have?
Last edit: 1 year 2 minutes ago by DRCW.
11 volana 4 herinandro lasa izay #967 by robtho
Izaho dia mihazakazaka DX11 amin'ny windows 7 matihanina amin'ny version FSX tsotra. Nisotro ronono aho ary niverina indray ny fiaramanidina simika taorian'ny taona marobe aho ka somary maina ihany. Fa hitako ity tranokala ity mahafinaritra ary ny ankamaroan'ny fampisehoana dia toa tsara ny miasa. Indrisy fa ireo no tena tianao
11 volana 4 herinandro lasa izay - 11 volana 4 herinandro lasa izay #968 by DRCW
Hiaka indray ... FSX ao amin'ny safidinao safidy dia afaka mihazakazaka amin'ny DX9 na DX10 Preview / Rehefa noforonina ny FSX, alohan'ny famoahana ny DX10, fa mandeha amin'ny DX9 amin'ny alàlan'ny default. Mandehana any amin'ny menuo safidy ary ataovy azo antoka fa tsy voamarina ny boaty DX10. Rikooo ny fiaramanidina rehetra dia mihazakazaka DX9 tsy misy. Ny sasany dia DX10 azo ampiharina raha toa ka ao amin'ny famaritana. Misy famoronana raiketika afaka manitsy ny tsanganana DX10, fa raha tsy mividy an'io programa io, dia tsara kokoa ny mandamina FSX amin'ny DX9. Ny safidy tsotran'ny DX10 dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ary miteraka tontonana izany. Windows 7 dia sehatra iray matanjaka ho an'ny FSX ary izany no ampiasaiko amin'ny simulation. Amin'izao fotoana izao dia nilaza ianao fa manana andian-dahatsoratra mivantana amin'ny FSX. Raha azoko io zo io dia midika fa ianao dia manana ny iray amin'ireo famoahana voalohany navoaka, na ny version deluxe. Raha izany no izy dia mila ampidirina SP1 sy SP2 ianao, na ny Acceleration dia tsy maintsy ampidirina. Raha tsy izany, ny ankamaroan'ny freeware sy payload vaovao dia hanana olana ara-nofo. Manana fanontana volamena FSX aho izay tonga miaraka amin'ny disk drive. Azo inoana fa ho hitanao fa raha tsy nanamarina ny boaty Preview DX10 ianao rehefa nameno ilay programa, ny olana dia ny hoe ny FSX dia tsy eo amin'ny toerany miaraka amin'ireo fonosana ilaina. Ampahafantaro ahy ... Misaotra
Fanovana farany: 11 volana 4 herinandro lasa izay DRCW.
11 volana 4 herinandro lasa izay #971 by robtho
Fantastic !! Misaotra betsaka noho ny toro-hevitra sy fitarihana feno hatsaram-panahy. Navoaka ny SP 1 & SP2 araka izay soso-kevitrao fa toa miasa tsara izao. Misaotra anao indray.
11 volana 4 herinandro lasa izay #972 by DRCW
Izany no mahatonga antsika eto, mba hifanampy ny fialam-boly,
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: robtho
11 volana 4 herinandro lasa izay #974 by robtho
mamerina ny fisaorana anao
Fotoana mamorona pejy: 0.261 segondra